31 October – Maalinta Caalamiga ee Magaalooyinka. | HimiloNetwork
31 October – Maalinta Caalamiga ee Magaalooyinka.
Posted by: Zakariya in Wararka October 31, 2017	0 256 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Maalinta Magaalooyinka Caalamka waxaa 27 December sanadkii 2013-ku dhawaaqay Kal-fadhiga Guud. Taniyo markaas 31 October sanad kasta ayaa loo dabaal-degaa. Hal-ku-dhegga guud ee Maalinta Caalamiga ee Magaalooyinka waa magaalo fiican iyo nolol hagaagsan, waxaana looga golleeyahay in lagu iftiimiyo guulaha laga sameeyey kacaanka magaaloobidda iyo caqabadaha horyaalla horumarka magaalooyinka.
Markii ugu horreysay xuska Maalinta Caalamiga ee Magaaloobidda waxaa lagu qabtay Shanghai dalka Shiinaha 31 Oct sanadkii 2014. Waxaana halheys looga dhigay horseedka is-beddelka magaalooyinka.
Xilli dunida maanta ay wajahayso kororkii ugu ballaaran ee kobaca magaaloobidda taariikhda la hayo – halkaas oo malaayiin qofood ay kusoo shubmayaan magaalooyinka, waxay yeelayaan muuqaal aad uga fog sanadba sanadaha xiga.
Waana sababta keentay in QM ay maanta oo kale u aqoonsado maalin la is xusuusiyo waxa ka jira magaalooyinka.
Ku dhawaad 54% dadweynaha caalamku axay ku nool yihiin magaalooyinka taas oo lasii saadaalinayo inay usii guurayso 66% marka lagaaro sanadka 2050-ka.
Si kale marka loo yiraahdo, 60% in ka badan dhulweynaha caalamka waxaa lagu wadaa inay magaaloobaan marka la gaaro sanadka 2030-ka. Waxaana kol hore bilowday sansaantii dhismayaashii lagu magaalayn lahaa.
Tirada dadweynaha ku nool magaalooyinka waxay kasoo sara kacday 3.9 bilyan sanadkii 2014-ka – halkii ay ka ahayd 746 milyan sanadkii 1950-kii, marka loo eego QM.
Marka lagaaro sanadka 2020-ka, kala bar dadka ku nool qaaradda Asia waxaa la filayaa inay ku noolaadaan magaalooyinka – halka qaradda Afrika loo badinayo 50% in muwaadiniinteedu ay ku noolaan donaan magaalooyinka marka la gaaro 2035-ka.
Reer miyiga ugu badan caalamka oo gaaraya 853 milyan waxay ku nool yihiin dalka Hindiya – waxaana soo labeeya Shiinaha oo ah 666 milyan.
Magaalooyinku laga yaabee inay hoy u noqonayaan tirada isasoo taraysa oo dadweyne ah, hayeeshe waxay oogada dhulka oo dhan kaga fadhiyaan 1%.
Waxaa jira magaalooyin gaaraya 28 kuwaas oo ay ku nool yihiin dadweyne ka badan 10 milyan halkii magaalaba marka lala barbardhigo sanadkii 1990-kii. Sanadkii 1970-kii, New York iyo Tokyo waxay ahaayeen laba magaalo ee ugu weyn caalamka.
Wali caasimadda dalka Japan ee Tokyo waa magaalada ugu weyn caalamka halkaas oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 38 milyan oo qof.
Qaaradda Asiya waxay hoy u tahay 53% dadweynaha caalamka ee ku nool magaalooyinka halka qaaradda Yurub ay hoy u tahay 14%: qaaradda Latin Amerika iyo Caribbean-kana waxaa ku magaalooyinkooda ku nool 13%.
Helidda dadweyne dhan 500, Vatican-ku waa dalka ugu yar dalalka madaxa bannaan ee caalamka. Nasiib-darro waa magaalada ugu badan ee lagu diiwaan-geliyo danbiyada rayidka.
Marka loo eego hey’ad qiimeysa heerka wacnaan ee nolosha ka fog miyiga oo sanadkii hore qiimeyn ku samaysay kala horreynta magaalooyinka, magaalada ugu nolosha fiican tayo ahaan waa caasimadda dalka Austria ee Vienna – halka Zurich oo kamid ah Switzerland ay soo galayso booska labaad.
Baahida loo qabo daaqada iyo biyaha waxaa lagu wadaa inay gaaraan 45% dunida oo dhan. Hey’adda UN-Habitat ayaa sheegtay in magaalooyinka caalamku ay ku fashilmeen in nafis muuqda u sameeyaan muwaadiniinta usoo dhamaaday nolosha magaalooyinka. Mana muuqato dadaallo lagu xejinayo dhibaatooyinka isasoo taraya ee magaalooyinka ka taagan.
Haddii aan hadda lasii bilaabin tallaabooyin la iskugu dheelli-tirayo baahida xad-dhaafka ah ee ka jirta magaalooyinka iyo dadka oo ugu danbeyn kasoo dhamaanaya nolosha miyiga, saadaasha ah nuuca ay u ekaan doonaaan magaalooyinka ayaa ku sugan hubaal la’aan.
Is-bedellada cimillada iyo hab-wareega nololeed ee deegaanka waxaa gunta hoose ee xalkeeda laga anba-qaadi karaa sare u qaadista nolosha bulshooyinka sida qeyrul-caadiga ah uga soo fatahaya magaalooyinka.
Inaan qorshe loo sameynin tayaynta nolosha magaalooyiinka, waxay culeyska jira ee cimilada iyo wasaqoobidda hawada waxay liifadda usii gaabinaysaa in xal waara laga gaaro.
Previous: Nin Saddex sano geed ku dul noolaa oo Dhulka ugu danbeyn lasoo dhigay!
Next: Jaceyl ma loo dhintaa?! (Qisso Jaceyl ah oo xanuun badan).
Markay Gabadhu Rabto Inay Wax Dhasho–Hooyo noqoto